အသုံးဝင်ဆုံး Bookmaker Ultimate Guide
ကျနော်တို့ကအမှုအရာမလုပ်ကြပါဘူး 1 /2ငါလောင်းကစားကြောင်းဝဘ်ကောင်းစွာသောဝဘ်နောက်ဆုံးသောလမ်းညွှန်ကိုထုတ်လုပ်ငါအဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြသည်သော CheekyPunter.com မှာဒီမှာ. ဤလမ်းညွှန်သည်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်သင့်အတွက်တစ်ခုတည်းသောအချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်လျော်သောသင်နှစ်သက်သောစာအုပ်နှင့်ပြုလုပ်သောစာအုပ်စာတမ်းလုပ်သူကိုတွေ့လိမ့်မည်။.
ကျွန်ုပ်၏ကတိ: CheekyPunter.com တွင်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အတူတည်ငြိမ်မှုနှင့်ရိုးသားမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်နိုင်သည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုသာအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်ဟုသင်ကတိပြု.
ထိပ်တန်း Picks: 1-10
ကောင်းပါတယ်, တရားဝင်ဗစ်တာ Chandler, Gibraltar တွင်အသိအမှတ်ပြုထားသည့် bookmaker များနှင့်များစွာသောဆက်စပ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. သူတို့ဒါအလွန် level အဘယ်ကြောင့်ဒီနေရာကိုပါပဲ:
တစ်ပေါင် ၂၅ ပေါင်ပေးရမည့်အခွင့်အလမ်းသည်သင်ပူးပေါင်းရန်မလိုပါ၊ 2.0 ပထမ ဦး ဆုံးသောအမှုစဉ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို.
ဥရောပဘေ့စ်ဘောပွဲများကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်ဝဘ်ဆိုက်တွင်ပုံမှန်အမြင့်ဆုံးအခွင့်အလမ်းများ - အလေးသာမှုနှိုင်းယှဉ်မှုပညာရှင်များအလေးသာမှုဖြင့်စစ်ဆေးပြီး oddschecker.
ဒီအကောင်းဆုံးငွေဖြစ်ကြောင်းဒီသေချာပေါက်ပြန်အထူးအထူးဖြစ်ပါတယ် (ဟုတ်ကဲ့ Paddy Power ထက်အများကြီးပိုကောင်းတာပေါ့) သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုဝဘ်တစ်ခုကိုင်ရပါလိမ့်မယ် - ကျွန်တော်တို့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး? သငျသညျပိုကောင်းအမြဲကြည့်ဖို့သူတို့ကိုဝေးစစ်ဆေးပါ.
A + အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - Betvictor သည် Bet365 မှအွန်လိုင်းဘေးတွင်ရှိသည့်အခြားစာအုပ်စာအုပ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်) အိုတစ် ဦး A + အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးရဖွယ်ရှိသည်. ဤအရာသည်ထိပ်တန်းဖြစ်ပြီးယခု မှစ၍ ယုံကြည်မှုမရှိကြပါ, ရိုးရှင်းစွာပြောဆိုခြင်း (သို့) ပြtoနာများကိုထပ်မံပြောဆိုရန်အခြေခံအားဖြင့်သူတို့သည်သင့်အားကောင်းကျိုးပေးသည်ကိုပြသသည်.
- Betvictor တက်ရောက်ရန်ဤ link ကိုနှိပ်ပါ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါင် ၂၅ ပေါင်ပေးပြီးအခမဲ့အကောင့်ရနိုင်ပါပြီ.
နံပါတ်2PaddyPower.com
စပါး powerPaddy Power သည်ဒီကျွန်း၏လောင်းကစားကော်မရှင်ကြောင့်လိုင်စင်ရရှိထားသည်. သူတို့က punters မှကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်အများကြီးရရှိပါသည်:
နေ့စဉ်ငွေပြန်အမ်းငွေနှင့်သိသာထင်ရှားသောအားကစားပွဲများအတွက်ကြီးမားသောကမ်းလှမ်းမှုများကိုပြန်ပေးပါ, သိသိသာသာတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲနှင့် Wimbledon ကဒီမှာ.
ပေါင် ၂၀ အလောင်းအစားသည်ဈေးနှုန်းချိုသာသောဖောက်သည်များဖြစ်ပြီးအလွယ်တကူလောင်းကစားခြင်းဖြင့်ဖြန့်ဝေသည်။ ထိုအရာအားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရှိသမျှအရာအားလုံးအပေါ်သင်၏တန်ဖိုး ၅ ပေါင်ဖြစ်သည်။ 2.0 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသော.
တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုကိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလုံးသည်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အကောင့်မှအမြတ်အစွန်းရရှိသူအားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်.
အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင့်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အမြတ်အစွန်းကိုပေးသောနှစ်ဆ (သို့) သုံးဆအထိမကြာခဏဖုံးလွှမ်းနေသောတိုးချဲ့ထားသောအခွင့်အလမ်းများမြှင့်တင်ရေး.
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွင်းစပါးစွမ်းအင်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပေးထားသည်. သူတို့၏အထူးအကျိုးကျေးဇူးမှာဤကမ်းလှမ်းချက်သည်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသောတန်ဖိုးရှိမှုဖြစ်နိုင်သည်. ဒီဆက်ဆက်ကြိုဆိုပါတယ်အပိုဆုပြီးနောက်အမြတ်အစွန်းရန်အခွင့်အလမ်းတွေကိုအများကြီးရှိပါတယ်.
- ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သောဤ link ကို နှိပ်၍ ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ဖွင့ ်၍ သင်၏ပေါင် (၂၀) ​​အလောင်းအစားကိုကုန်ကျစရိတ်မလိုပါ။!
ဝီလျံဟေးလ်ဝီလျံဟေးလ်သည်အခြားစာအုပ်ရောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်လေ့ရှိပြီး၊. ပေါင် ၁၀ သည်ပေါင် ၂၀ ကိုယူဆောင်လာသည့်အလျောက်ကစားသမားသစ်များအားကြိုဆိုသူများကိုကြိုဆိုသည်။ ဤသည်သည်အမှန်တကယ်အွန်လိုင်းစီးဆင်းမှုဖြစ်သည်။. ၀ င်ငွေရရှိနိုင်သည့်တိုးမြှင့်သည့်အလေးသာမှုများဖြစ်သည့်ငွေများနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများတွင်သူတို့ကသိပ်မကောင်းပါ) ဒါနဲ့သူတို့ကိုသာတစ် ဦး ကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်.
betfredBetfred သည်ဂျီဘရောလ်တွင်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးဘောလုံးနှစ်ခုလည်းရှိသည်. ပထမတစ်ဂိုးမှာဂိုးရမှတ်သည်စုစုပေါင်းအသင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်သိသိသာသာတိုးပွားလာစေပြီးစုဆောင်းသူများကိုဂိုးသွင်းသည်. နောက်ရှင်းပြချက်တစ်ခုကစိတ်ကျေနပ်မှုပါပဲ။ ဒီဟာကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းလောက်သာမဟာဗျူဟာဖြစ်တယ်၊ ဒါကအွန်လိုင်းဂိမ်းမှာပစ်မှတ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကိုရလိုက်တဲ့အခါမှာဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးဂိုးသွင်းသူလောင်းကစားသမားများအပေါ်သင်၏ကော်မရှင်ကိုနှစ်ဆသို့မဟုတ်သုံးဆတိုးစေသည်။. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အထူးအားကစားတစ်ခုကစျေးကွက်တစ်ခုလုံးရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဒါဟာတစ်ခုစီကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။. ၀ ယ်ယူသူများအတွက်အသစ်များဖြစ်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်မပေးရသောပေါင် ၃၀ အပိုဖြစ်သည်, ပေါင် ၁၀ ပေါင်သာလောင်းရန်သင်သာလိုသည်.
လောင်းကြေးအသစ်များအတွက်စျေးနှုန်းပေါင် ၃၀ မပါသည့်လောင်းကြေးကိုသေချာစွာစုစည်းနိုင်ပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ကြော်ငြာခြင်းကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Betfred ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။.
coralCoral သည်များသောအားဖြင့်သင်ဗြိတိန်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အခွန်ကောက်ခံရာဌာနသို့မသွားရန်တားမြစ်ထားသည့်အချိန်တွင်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ ၎င်းမှာအမှန်တကယ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုဖြစ်သည်. ၀ ယ်ယူသူအသစ်များကိုပေါင် ၂၀ အလောင်းအစားဖြင့်ပေါင် ၅ ပေါင်အလောင်းအစားဖြင့်ကြိုဆိုသည်) ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ် ဦး ကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်. ဒီသန္တာအနီရောင်သန္တာကျောက်တန်းဆိုတာပြnoနာမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အချိန်အတိအကျမှာဒီဟာတွေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းသင့်တဲ့အကြောင်းရင်းမရှိပါဘူး။. သူတို့ကကမ်းလှမ်းမှုအလေးသာမှုတွေလုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါတွေဟာများသောအားဖြင့်နည်းပြီးဝေးလွန်းတယ်6ကျွနု်ပ်တို့၏ဝဘ်စာမျက်နှာများတွင်ထိပ်ဆုံးဖြစ်သောကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်.
ဤအကဲဖြတ်ချက်အားလိုင်ဘွန်းမားလုပ်သူမှပေးသောအတိအကျနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်အတွက်အမှန်စင်စစ်အနီရောင်သန္တာဖြစ်ပါသည်.
Ladbrokes.com - ဒီအပန်းဖြေမှုအများစုမှာအသစ်သောအကာအကွယ်ပေးသောစားသုံးသူများအတွက်အလွန်ကောင်းသည်မှာပေါင် ၅၀ အလောင်းအစားဖြစ်သည်. တိုင်းမကြာခဏသူတို့ကြည့်ရကျိုးနပ်ဘောလုံးပရိုမိုးရှင်းကို run ပေမယ့်ရိုးရိုးစံချိန်တင်ကျော်ပိုပြီးများစွာသောအခြားစာအုပ်လုပ်သူများကဲ့သို့ဤဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်မဟုတ်ပါစျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်စဉ်ဆက်မပြတ်တည်ရှိ. ဤရွေးချယ်မှုသည်ဤအချက်သည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုနာမည်ကောင်းရထားသည်။ သို့သော်ပြိုင်ပွဲဝင်သူများကိုသူတို့နှင့်အတူကပ်ရန်ကြီးမားသောအကြောင်းပြချက်များကိုပေးသည်. အမှုအရာပြောင်းလဲသည်အထိသူတို့သည်ငါ၏စာရင်းပြုစုမည်မဟုတ်. Ladbrokes ပြန်လည်သုံးသပ်ဒီမှာ.
888အားကစား # 8
888Sport.com - ဒီဟာကဖောက်သည်တွေအတွက်သေချာတာပေါ့. သူတို့ရဲ့အပိုဆုပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူပူးပေါင်းကျိုးနပ်သို့သော်သင်ဖြစ်ကောင်းရှည်လျားသောအတွက်ဆွဲထားမည်မဟုတ်. ပိုမို၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအလေးသာမှုများကိုအကျိုးပြုသည့်သုညဆက်လက်လှုပ်ရှားမှုများသည်လေးနက်သည့်ကစားသမားများစွာကိုနေရာချလိမ့်မည်. ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုကို 888port အသေးစိတ်ကိုသွားပါ.
StanJames.com - ပေါင် ၁၀ ကိုလောင်းကြေး ၁၀ ပေါင်မကုန်သောဖောက်သည်များယူဆောင်လာသည်. အစိုင်အခဲရှိသော site တစ်ခုသည်ကောင်းမွန်သောတန်ဖိုးနှင့်စပ်လျဉ်း။ အပိုဖွင့်ခြင်းမှအပကောင်းမွန်သောသဘောတူညီချက်တစ်ခုမျှသာမရှိပါ. Real time streaming ကိုဝယ်ယူနိုင်ပါသည်. လောင်းကစားသမားများ၏လှုပ်ရှားမှုများအတွက်မည်သည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုမှမတွေ့ရပါ။ သင်ဒီမှာရှိနေမည်မဟုတ်ပါ. ထိုသူအားလုံး Stan Stan ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစာမျက်နှာနှင့်ပတ်သက်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမှာခေါ်ပါစစ်ဆေးပါ.
Totesport.com - အသစ်စက်စက်အသစ်မဟုတ်သောအကုန်အကျသက်သာသည့်ကစားသမားဖြစ်သည်. ဤအချက်သည်တစ်ခုတည်းသောအဓိကအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ကဲ့သို့လောင်းကြေးများကိုအချက်အလက်နှင့်တူသည်ကိုစုစည်းလိုလျှင်ဖြစ်သည် 6, totejackpot သို့မဟုတ် toteplacepot. အခြားအပန်းဖြေမှုများကိုမကောင်းသောအကာအကွယ်ပေးမှုနှင့်အပိုဆုကြေးများမရှိခြင်းတို့တင်တက်သည်အလွန်အသုံး ၀ င်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးအောက်သို့တက်သွားသည်. ငါ၏အ Totesport ပြန်လည်သုံးသပ်သွားပြည့်စုံသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကိုင်ထားပါ .
သင်အလောင်းအစားလုပ်လိုသည့်အလောင်းအစားသည်သင်လောင်းလိုသည့်အပန်းဖြေအနားယူသည့်နည်းတူမည်သည့်သိုက်အစားထိုးလဲအစားထိုးလဲအရေးပါသည်. များစွာသောသူတို့သည်ဤအကြွေးကိုယူနိုင်သည်အကြွေးများစွာယူကြသော်လည်းထိုဆိုဒ်များက၎င်းကိုဖွင့်ထားသည့်အချို့သော PayPal အမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သေချာပေါက်သိသာထင်ရှားသည်။. နှိုင်းယှဉ်အခြားသော e-wallet အမျိုးအစား ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်.
သင်လောင်းကစားနေသောအကောင်းဆုံး paypal ဆိုဒ်များမှသင်ဤသည်ဆက်ဆက်ယခင်ဝက်ဘ်လင့်ခ်ကို နှိပ်၍ စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်. သင် ilk ကိုကြည့်လိုက်လျှင်၎င်းသည်အတိအကျနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ လက်ခံသည့် Ukash ဝက်ဘ်ဆိုက်အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော backlinks များကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းတွေ့လိမ့်မည်။.
တကယ်တော့ငါဟာသင်၏ဘဏ်အကောင့်ကိုရန်ပုံငွေအတွက်အသုံးပြုလိုသောသိုက်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စိတ်အားထက်သန်သောအပိုင်းတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ သို့မှသာသင်ကိုယ်တိုင်သင့်အတွက်နည်းလမ်းကို အခြေခံ၍ သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်တော်မည့်ဆိုဒ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။. ယနေ့သင်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏areaရိယာကိုသိုက်ရွေးချယ်မှုများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်ထိပ်ဆုံးရှိမီနူးကိုထည့်သွင်းသည်နှင့်တပြိုင်နက် 'ငွေသွင်းခြင်း' link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တွေ့နိုင်သည်။.
အလောင်းအစားများ & အပိုဆု
စုစုပေါင်းပမာဏတစ်ခုတည်းကိုသာရွေးချယ်ရန်တစ်ယောက်ကိုကျွန်ုပ်မတိုက်တွန်းပါ။ ဤသည်မှာသင်စုပေါင်းပြီးသည်နှင့်သင်လက်တွဲနိုင်သည့်ငွေပမာဏဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရရှိထားကြောင်းကျွန်ုပ်ကြားရသောကြောင့် ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။ ကြောင်းသင်၏ပြissueနာအများစုလျှင်.
အလွယ်တကူမလောင်းနိုင်သောareaရိယာကိုကလစ်လုပ်ရန်indeedရိယာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်ရရှိသောအခါ၎င်းသည်အခမဲ့မဟုတ်သောအလောင်းအစားများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားသောကြောင့်၎င်းသည်သေချာသည့်လက်ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။.
မှတ်စု: သင်၏အကောင့်ကိုပိုမိုအရေးကြီးသောအရာများသို့သွားရန်အပိုဆုငွေရရှိခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသော်လည်းဤသည်မှာကြာမြင့်ပါသည်. ဒီအားဖြင့်အားလုံးပိုက်ဆံအထူးချက်ချင်းပြန်နှင့်တိုးတက်လာသောအလေးသာကမ်းလှမ်းမှုကိုပြန်. BetVictor နှင့် Paddy စွမ်းအင်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသည့်အချက်နှစ်ခုရှိသည်ကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးကိုသင်စစ်ဆေးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုသည်။. ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပိုင်းကိုကြည့်သည့်အခါ၎င်းသည်အမှန်တကယ်အတိတ်ဖြစ်သည့်ဟိုက်ပါလင့်ခ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ပါ.
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းဖြင့်အင်တာနက်ဖြစ်သောမည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်မိုဘိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ပိုကြီးသည့်ကစားသမားများအနေဖြင့်အခြားသူများထက်သူတို့၏မိုဘိုင်းထောက်ပံ့မှုတွင်အချိန်နှင့်ခွန်အားများစွာပိုပေးသည်။.
Apps များသတ်မှတ်ထားသည်: ထိုအခါငါကံကောင်းတာကအကဲဖြတ်ပါတယ်။ ဒီဟာတွေအားလုံးကိုအမျိုးအစားခွဲခြားထားတယ်။ သင်မိုဘိုင်းအပိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါဘယ်ဖုန်းကမှအကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်မှာသေချာတယ်။ ငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအက်ပ်တွေကိုလက်ခံချင်တယ်ဆိုရင်တက်ရောက်ဖို့ hyperlink ကိုနှိပ်ပါ။.
မှတ်စု: သင်သည်သူတို့၏သီးခြား app မှတစ်ဆင့်မည်သည့် website ကိုမဆိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သေချာသည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်လက်တော့ကွန်ပျူတာကို သုံး၍ မှတ်ပုံတင်သောရှေးဟောင်းလူများအတွက်ဤအရာသည်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။. အချို့သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များတွင်အမှန်တကယ်အပိုဆုများရှိသည်.
သူကဒါကိုနောက်ဆုံးလမ်းပြသူအဖြစ်သူကထည့်သွင်းတွက်ချက်သည်. ထိုအခါသင်အမှန်တကယ်သင်မူလတန်းဥရောပ၌၎င်း, အပိုဆောင်းလျှင်သင်လောင်းကစားပေါ်တွင်လောင်းကစားဖက်ဒရယ်အစိုးရဥပဒေပြဌာန်းရှိသည်မဟုတ်ကြပြီသင်လိုချင်သောမည်သည့်ဘွတ်ကင်ပြုလုပ်သော website ကိုမဆိုအသုံးချရန်.
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ၀ က်ဘ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်လောင်းကစားခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသောနိုင်ငံများတွင်နေထိုင်ပါကမည်သည့်အရာကိုရွေးချယ်သင့်သည်ကိုလက်ခံရန်နှင့်လက်ခံနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. အာရှသည်ဤအချက်သည်အဓိကကျသည်. CheekyPunter.com ၏ငွေကြေးintoရိယာအတွင်းသို့တိုင်းပြည်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခါသင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအများစုကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်.
မှတ်စု: အပိုထပ်ဆောင်းပမာဏများသည်ငွေသားမှမကြာခဏငွေနှင့်ကွဲပြားသည်။ ထို့ကြောင့်မကျေနပ်မှုကိုကာကွယ်ရန်သင်မ ၀ ယ်ခင်မ ၀ ယ်မှီသေချာစစ်ဆေးပါ.